कहाँबाट आउँछ खुशी ? – Health Post Nepal
कहाँबाट आउँछ खुशी ?
२०७५ भदौ ५ गते १०:३९
घर पुग्नेबित्तिकै न्यानो अनुभूति किन हुन्छ भन्नेबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? अथवा हाँस्दा राम्रो अनुभूति हुन्छ ? या शारीरिक अभ्यासले किन मानिसको भावनालाई राम्रो बनाउँछ ?
वास्तवमा मानिसमा खुशी कहाँबाट आउँछ, शरीरका कुन अंगले यसमा भूमिका खेल्छन् ? यी सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ स्नायु वैज्ञानिक डिन बर्नेटको पुस्तक ‘ह्याप्पी ब्रेन ः ह्वेयर ह्याप्पीनेस कम्स फ्रम, एण्ड ह्वाई’ मा पाइन्छ । उनले मानिसमा खुशीको अनुभूति ल्याउन स्नायु सञ्जालले कसरी काम गर्छ भन्नेबारेमा पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
घर फर्कदा राम्रो अनुभूति हुनु र छाड्दा नरमाइलो अनुभूति हुनुको सम्बन्ध हाम्रो घर र सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । वास्तवमा हाम्रो मष्तिष्कले हामीसँग जैविक रुपले सम्बन्धित कुरालाई पहिचान गर्ने र आनन्द अनुभूति गराउन सहयोग गर्छ, यसबाट खुशीका हर्मोन निस्कन्छन् ।
अनि, घरबाट टाढा रहँदा किन ‘होमसिकनेस’ हुन्छ ? अथवा घर छाडेको पहिलो रात किन राम्ररी निद्रा पर्दैन ?
मष्तिष्कले घरमा रहेको या नरहेको कुरा कसरी थाहा पाउँछ ? स्नायु विशेषज्ञ बर्नेटले यसबारेमा पनि पुस्तकमा लेखेका छन् । मानिसको मष्तिष्कमा ‘बाउन्ड्ररी सेल’ हुन्छन् । कुनै पनि वातावरणीय घेरा अर्थात् बाउन्ड्ररी (जस्तो :घर पस्ने ढोका) मा संलग्न हुँदा उक्त कोष सक्रिय हुन्छ र हामीलाई हाम्रो सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गर्न मद्दत गर्छ ।
यसैगरी, हाम्रो काम, हाँसो, माया, प्रेम र उमेरजस्ता चिजले पनि खुशीलाई प्रभाव पर्छन् । जब हामी हाँसउठ्दो चिज देख्छौं, त्यसपछि हाम्रो मष्तिष्कले त्यसलाई पहिचान गर्छ र खुशीको अनुभूति दिलाउँछ ।
हाम्रो मष्तिष्कमा चुट्किलालाई पहिचान गर्नसक्ने भाग पनि हुन्छन्, यसलाई टेम्पोरल, अक्सिपिटल र पेरिएटल लोब्सजस्ता नामले चिनिन्छ । यिनै कोषबाट हाँसो उत्पत्ति हुन्छ ।